उमालेको तरकारीहरु संग हुक - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
माछा30 मिनेट4 व्यक्ति
स्टीम्ड सब्जीको साथ हक को लागि यो नुस्खा एक तयारी छ जुन मलाई खानाको लागि मनपर्दछ। माछा मेरो मनपर्ने खानाहरू मध्ये एक हो र तरकारीहरूसँग भेरोमा बनाइन्छ राम्रो र धेरै हल्का देखिन्छ.
यस प्रकारका व्यंजनहरू तिनीहरू आफैलाई हेरचाह गर्न असाधारण छन् वा आहार वा वजन घटाउन को एक आहार बनाउन। यो सेलिआक रोग वा ग्लूटेन, अण्डा र ल्याक्टोज पचाउन नसक्ने मानिसहरूसँग पनि उपयुक्त छ।
यो संग बनाउन सकिन्छ सबै प्रकारको माछा पर्चको फिललेटहरू जस्तै, सुनौलो, समुद्री बास, आदि मैले यसलाई हैक र पेच फिल्टको साथ प्रयोग गरेको छु र म तिनीहरूलाई धेरै मन पराउँछु।
यो पनि धेरै छिटो छ, किनकि को बारे मा 30 मिनेट हामी प्लेट तयार छ। यसलाई प्लेट गर्न, तपाईं माथिको माछाको साथ तरकारीको ओछ्यान राख्नु पर्छ। तपाइँ यसलाई आफ्नो रुचि अनुसार मौसम गर्नुहोस र, यो विशेष टच दिनको लागि, माथि अतिरिक्त कुंवारी तेलको थोप्लो जोड्नुहोस् ... र तपाइँसँग प्लेट १० तयार छ!
1 उमालेको तरकारी संग हाक
एक पूर्ण र स्वस्थ डिश।
१ चम्चा तेल
Ha hake fillets (हामी तिनीहरू एकै मोटाई छ भन्ने निश्चित)
१ चम्मच ओरेगानो
Wine० g बैंक वाइन
½ फिश स्टक क्यूब
१ आलु, खुल्ला र ०. cm सेन्टीमिटर स्लाइसमा काट्नुहोस्
१ zucchini, अनपील गरिएको र ०. cm सेन्टीमिटर स्लाइसमा काट्नुहोस्
100 ग्राम प्याज पातलो घण्टीमा काट
१ टमाटर पातलो स्लाइसमा काटियो
तेलले भेरोमा कन्टेनर ब्रश गर्नुहोस् र ह्याक फिल्टहरू राख्नुहोस्, तिनीहरूलाई नुन, मरिच र ओरेगानोको साथ छर्कने। हामी कभर र रिजर्भ गर्दछौं।
हामीले गिलासमा तेल र लसुन राख्यौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति5र हामी प्रोग्रामिंग फ्राई गर्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
पानी, सेतो वाइन र माछाको आधा ट्याब्लेट गिलासमा थप्नुहोस्। हामी तरकारीहरू टोकरीमा राख्छौं, आलु, जुच्चीनी, प्याज र टमाटरको तहहरूलाई मिसाएर।
हामी टोकरीलाई शीशामा परिणत गर्दछौं र भेरोमा कन्टेनरलाई यसको स्थानमा राख्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
अन्त्यमा, हामी टोकरी बाहिर निकाले र तरकारीहरू स्रोतमा राख्दछौं, नुनको साथ छिचोल्नुहोस् र माछालाई माथि राख्नुहोस्, शोरबाको केही भागले छर्कनुहोस् र यदि हामीलाई यो मनपर्दछ भने, माथि अतिरिक्त कुंवारी जैतूनको तेलको थोप्लो थप्नुहोस्। ।
हामी अहिले सेवा गर्दछौं
थप जानकारी - तरकारी गार्निशको साथ गिल्थहेड समुद्री बीम / कद्दू सास र जंगली शतावरी संग स्टीम्ड समुद्री बास
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सलाद र तरकारीहरू, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, माछा, शासन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » माछा » उमालेको तरकारी संग हाक
धेरै धनी तर सबै भन्दा बढि तपाईले धेरै राम्रो, धेरै स्वस्थ भन्नु भएको छ।
मँ हक बिना, उदाहरणका लागि साल्मनको साथ।
यो एक सुपर स्वस्थ नुस्खा हो र सामनको साथ म पनि साइन अप गर्दछु, मलाई वास्तवमै त्यो माछा मन पर्छ।
सिल, कस्तो स्वादिष्ट !! अर्को विचार, सजिलो र स्वस्थ। यो मलाई मन पर्छ!
मारी मारोटो भन्यो
हरेक दिन मलाई तपाईंले मलाई दिने व्यंजनहरू मनपर्दछ, धेरै धेरै धन्यवाद
मारी मारोटोलाई जवाफ दिनुहोस्
मँ खुशी छु तिमी उनीहरूलाई मन पराउँछौ, मारी।
पछिल्लो रात मैले नुस्खा बनाएँ र यो सबै minutes० मिनेटमा तयार भयो। खैर, म तपाईंलाई के बताउँछु। बच्चाहरूका लागि पूरै तरकारीहरू राख्नुको सट्टा, यसलाई उमालेपछि, मैले आलुलाई सेतो साथको भाँडामा हालेँ, र माथि मैले काटेर तरकारीहरू ब्रोथको साथ राखें र स्वादिष्ट सास बाहिर आयो। तपाइँ कुन सफलता जान्नुहुन्न, र पनि चिल्लो र स्वादिलो। हामी सबैले यसलाई मन पराए-
मलाई यो नुस्खा पठाउनका लागि धन्यबाद।
कस्तो राम्रो विचार, Adela! म तरकारीहरु स्वाद गर्न जाँदैछु जस्तो गरी तिमी उनीहरुलाई बनाउँदछौ, किनकि ती स्वादिष्ट हुनुपर्दछ।
हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
नमस्कार, म सँधै तपाईको पछि लाग्छु तर अहिले सम्म मैले केहि लेखेको छैन, म मियामीमा बस्छु तर म म्याड्रिडबाट हुँ।
मेरो-बर्षेको छोराको विशेष ग्लूटेन-रहित र केसिन-मुक्त आहार छ र उहाँ सधैं हामीबाट बिभिन्न चीजहरू खान्नुहुन्छ हिजो हामी सबै टेबुलमा बस्यौं र पहिलो पटक हामी सबैको लागि समान मेनू खान सक्षम भयौं, पक्कै उसको लागि केवल आलु र माछा किनभने प्याज र बाँकी उहाँलाई खाने को लागी कोही पनि छैन।
धेरै धनी, स्वादिष्ट, मलाई मनपरायो, मैले यसलाई तिलपिया कम्मरले बनाएको थिएँ, जुन यहाँ वरिपरिको धेरै लोकप्रिय माछा हो र यो स्वादिष्ट पनि थियो।
तपाईंको सबै व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद, तिनीहरू महान छन्।
SAYAKHA लाई जवाफ दिनुहोस्
सायाखा, धेरै टाढाबाट (मियामी) हेर्नु भएकोमा तपाईंलाई धेरै धन्यवाद। मलाई खुशी छ कि तपाइँ हाम्रो ब्लग लाई मन पराउनुहुन्छ, तपाईको प्रोत्साहनका साथ तपाईले हामीलाई ठूलो उत्साहले व्यंजनहरु बनाउनु जारी राख्नु भयो। शुभकामना।
उत्तम केटीहरू र धेरै आभारी देखि मलाई आहारको लागि यी व्यंजनहरू आवश्यक छ, मेक्सिकोबाट एक ठूलो आलिंगन ...
इसाबेल, हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद र हामी यस प्रकारका व्यबहारहरू प्रकाशित गर्न जारी राख्छौं जुन सबैका लागि स्वस्थ हुन्छन्।
मँ खुशी छु तपाईलाई यो मन परेको छ, इसाबेल। मेक्सिकोलाई धेरै अभिवादन छ र धेरै टाढाबाट हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो एक धेरै राम्रो साथी मार्च २०११ सम्म काम गरीरहेकी छिन् र उनी खुसी छिन्।
इसाबेल लारिस भन्यो
सिल्भिया र एलेना एकदम ध्यान दिएर पाएकोमा धन्यवाद, र एलेनाले यहाँको मेक्सिकोमा काम गर्ने तपाईंको राम्रो साथीलाई भन्छिन कि उनलाई उनको देशबाट टाढा भए पछि उसलाई केहि चाहिएमा (उसलाई मेरो ईमेल दिनुहोस्) र हामी खुशीले सम्पर्कमा छौं, अभिवादन !! !
इसाबेल लारीसलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद, इसाबेल। म मेरो साथीलाई भन्छु, तर चिन्ता नगर किनभने उनी महान छिन र उनले ठूलो समय बिताइरहेकी छिन् र महान व्यक्तिहरूसँग भेट गरे। शुभकामना।
नमस्ते कस्तो छ?
हिजो राती मैले यो खाना पकाउनको लागि बनाएँ। हामीलाई यो मन पर्यो। मैले कल्पना गरेन कि यो यति स्वादिष्ट हुनेछ। मेरो श्रीमान्लाई यो मन पर्‍यो।
म तपाइँको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद दिन चाहान्छु किनकि जोसँग धेरै समय छैन हाम्रो जीवनलाई समाधान गर्न को लागी।
धेरै धेरै धन्यवाद, Maribel। मलाई आशा छ कि तपाइँ हाम्रा रेसिपीहरू मनपराउनुहुन्छ। अंगालो।
जीसस डिएगो फ्लीकी भन्यो
हेलो, म एउटा थर्मो किन्छु, र यो छुट्टि, स्वास्थ्य र फरकमा विशिष्ट छ, मँ मेरो महिला भन्दा धेरै प्रयोग गर्दछु, र उनी सुखी छन्, म तपाईको ब्लग पढ्छु र सबै भन्दा धेरै मानिसहरुबाट म धेरै खुशी छु। द्रुत र स्वास्थ्य भोजन र खानेहरूको लागि जुन तपाईं FUERTEVENTURA बाट एक कडा बधाई दिनुहुन्छ ……
जेसस डिएगो फ्लाईलाई जवाफ दिनुहोस्
येशू, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म धेरै खुसी छु। हामी यसलाई ठूलो प्रेम र उत्साहका साथ गर्छौं र तपाईंको टिप्पणीहरू हेर्नाले हामीलाई जारी राख्न प्रोत्साहित गर्दछ। शुभकामना।
येशू, तपाईंको शब्दहरूको लागि धन्यवाद। मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई हाम्रो रेसिपीहरू मनपर्दछ र तिनीहरूले खाना पकाउन सजिलो, स्वस्थ र सरल बनाउँदछन्, जुन यो कुरा हो।
यो स्वादिष्ट हुनुपर्दछ, मैले यो गर्नुपर्दछ, मेरो श्रीमान्‌ले माछालाई धेरै मन पराउनुहुन्छ, म थर्मोमिक्स केही दिनको लागि प्रयोग गर्दैछु र म अझै नौसिखिए पनि छु, म यस प्रकारका अरू व्यंजनहरू पनि जान्न चाहन्छु, धन्यवाद।
स्वागत छ, जुआनी! म आशा गर्दछु कि तपाईंलाई यो हक मनपर्‍यो, यो एक स्वस्थ तर धेरै स्वादिष्ट विधि हो। रेसिपी अनुक्रमणिकामा मलाई आशा छ कि तपाइँले आफूले मनपराउनुभएको फेला पार्नुभयो र हामी यस शैलीका व्यञ्जनहरू प्रकाशित गर्न जारी राख्नेछौं। शुभकामना।
मलाई यो नुस्खा मनपर्दछ !!! यो छिटो, स्वस्थ र धेरै पूर्ण छ।
ब्रोथ जुन रहिरहन्छ दर्शनीय छ, यसले माछालाई धेरै स्वादिष्ट बनाउँछ ...
हामी संग यी धेरै व्यावहारिक व्यंजनहरु साझा को लागी धेरै धन्यबाद !!
क्रिस्टिना, म तपाईंसँग सहमत छु, धनी र स्वस्थ हुनुको साथै, उनले हामीलाई आफ्नो देखभाल गर्न मद्दत गर्दछ। हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
मसँग एक हप्ताको लागि Thermomix छ, तर हरेक दिन म अधिक रमाउँछु र मैले तपाईंलाई पत्ता लगाए पछि म एक अनुभवी भोजन बनाउने जस्तो देखिन्छु। मेरो परिवार खुशी छ। किनकि मेरो श्रीमान डाईटमा छन्, म यस प्रकारका व्यंजनहरू मन पराउँछु। आज राती म तपाईलाई आश्चर्यचकित गर्न जाँदैछु। हेरौं कि यदि यो तपाईंको जस्तो चाखलाग्दो बाहिर आयो भने। धन्यवाद।
कार्मेनलाई स्वागत छ, मलाई खुशी छ कि तपाईं हाम्रा व्यञ्जनहरू आनन्द लिनुहुन्छ। खुशीका छुट्टिहरु!
मलाई आशा छ तपाईलाई यो मनपर्‍यो, कार्मेन। यो एक धेरै स्वस्थ र हल्का नुस्खा हो। तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना।
धेरै धेरै धन्यवाद। यो स्वादिष्ट बाहिर आयो। ठूलो सफलता, मेरा बच्चाहरूले प्लेटमा केही छोडेनन् र न त मेरो लोग्ने। आज मैले क्लाउड केकको साथ हिम्मत गरेको छु र भोली म चिनी विना स्याउ बनाउनेछु (मैले क्रिसमसको पूर्वानुमान मिठाई ल्याउनु पर्छ)। म तिमीलाई भन्छु।
मैले गत हप्ता यो गरेँ, र मैले यो मन पराएँ! मसँग मद्य थिएन, त्यसैले मैले आधा गिलास काभा राखें जुन मैले पिइरहेको थिएँ, र न त थोरै ब्रोथ नै बनाएँ, तर मैले बनाएको थोरै तरकारी ब्रोथ थपें ​​... राम्रो ... यो एकदम राम्रो थियो, धेरै स्वस्थ थियो र म धेरै निश्चित पुन: दोहोर्याउनेछु। धन्यवाद !!!!
Goodiiiiiisiiiiimo, ऊ घरमा कसरी सफल भएको छ थाहा छैन। मैले यो बीम र सामनको साथ गरे किनकि यो मैले खरीद गरेको थिएँ र म एउटा उपाध्यक्षमा थिएँ, धन्यवाद।
Rakel लाई जवाफ दिनुहोस्
HI THERE! आज म पहिलो पटक लेखेको छु मैले स्टिमेड वेजिटेबलहरूसँग बनाएको छु, यो निकै राम्रो भयो !!!! र बिर्सनु हुँदैन कि यो एकदम स्वास्थ्य हो। तपाइँले मलाई प्राप्त गर्न पठाउनु भएकोमा धन्यवाद र म सम्पर्कमा रहनेछु। शुभकामना
NATTY लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईंले वास्तवमै यी रेसिपीहरू मनपराउनुभएको छ, म तिनीहरूलाई माया पनि गर्छु किनकि उनीहरू कती स्वस्थ छन्।
के म स्थिर हेक फिललेटहरू प्रयोग गर्न सक्छु?
नमस्कार !! यो धेरै राम्रो छ, मैले अडेलाले तरकारी (आलुलाई बाहेक) मसलामा राखेको कुरा भनेको के गरें र… धेरै स्वादिष्ट! म यसलाई सल्लाह दिन्छु। चुम्बनहरू !!
Mila लाई जवाफ दिनुहोस्
म यसको प्रयास गर्नेछु, मेरा छोरीहरूसँग काटेको तरकारीहरू राम्रो हुन्छन्।
सबै सफलता, धेरै स्वादिष्ट, मैले तरकारीहरू पनि कुच्यो, र राम्रो विश्लेषण, मेरो केट जो माछाको धेरै मन पराउँदैन, उसले यसलाई माया गर्थ्यो, यसको मतलब म तपाईलाई यी पाककृतीहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र सरल चुम्बनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
मलाई खुशी छ कि तपाईलाई सत्य मनपर्दछ कि यो नुस्खा स्वस्थ र हल्का खानाको लागि उपयुक्त छ।
नमस्कार! मैले यो हिजो राती बनाएँ, र मेरो प्रेमी र मैले यसलाई मन पराए!।, यो धेरै स्वादिष्ट थियो! तपाईंको व्यंजनहरुका लागि धेरै धन्यबाद!
Maite लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो, घरमा यो डिश हो जुन म धेरै तयार गर्दछु। यो हल्का खानाको लागि आदर्श हो।
मैले अर्को दिन नुस्खा प्रयोग गरीसकें। केवल कुरा जुन म आहारमा छु र म सेतो वाइन वा आलु पाउन सक्दिन, मैले वाइन थप गरेन र मैले आलुलाई बैगुनको ठाउँमा राखिदिए।
साथै, पछि मैले तरकारीहरू खरानी गरेँ र ह्याकलाई माथि राखें, उत्तम।
आज म फेरि दोहोर्याएको राम्रो छ। चटनी धेरै राम्रो छ र माछा, कुनै बोसो बिना।
नमस्ते, म मेरो अलि अलि गर्दै छु र म खुशी छु; के खान भनेर सोच्न म एकदम अल्छी छु, अब मलाई त्यस्तो समस्या छैन, मैले यो नुस्खा बनाएँ र यो स्वादिष्ट भयो।
aahhh ae मैले यो भन्न बिर्सें कि मैले यसलाई स्थिर मटरले बनाएको छु, र शानदार छ
सार्गोस जादूगर भन्यो
नमस्कार, मेरो राम्रो आधा र म भर्खर थर्मो this१ को संसारमा आईपुगेको छु (उनीहरूका अभिभावकहरूबाट राजाहरूको उपहार)। र म तपाईलाई भन्न चाहान्छु कि तपाईको ब्लग पत्ता लगाउन पाउँदा खुशी लाग्यो। म एक खेल माछावाला हुँ र हामी टी 31१ लाई माछाको साथ लिफ्ट दिन लाग्दछौं, त्यसैले अहिले हामी यो रेसिपी प्रयास गर्दैछौं, केवल हामी हाकको लागि जंगली माछालाई प्रतिस्थापन गर्नेछौं: समुद्री बास, समुद्री छाल र समुद्री जल मुख्य रूपमा। म तिमीलाई भन्नेछु कि तिनीहरू कसरी बाहिर आए। खैर, तपाइँको कामको लागि धेरै धेरै धन्यबाद छ र अरुलाई साझा गर्न को लागी T31 को लागी तपाइँको व्यंजनहरु
Sargos Enchantress लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई रेसिपीहरू मनपर्दछ, तर मसँग समस्या छ, म एक्लै छु र मँ व्यक्तिसंग लागी सल्लाह दिनको लागि उनीहरूलाई अनुकूलन गर्नमा गाह्रो हुन्छ, म तपाईंलाई एक्लै बस्ने मान्छेहरुका लागि थप व्यंजनहरु राख्न मन पराउँछु।
यदि तपाईंले खोज इन्जिनमा "एकल" शब्द राख्नुभयो भने, तपाईंले विशेष गरी एक्लै बस्ने र थर्मोमिक्सलाई हामी परिवारको रूपमा बस्नेहरू जत्तिकै माया गर्नेहरूका लागि डिजाइन गरिएका केही रेसिपीहरू पाउनुहुनेछ।
मलाई थाहा छ कि ती थोरै छन् तर थोरै पछि हामी बढि जानेछौं !!
धेरै राम्रो। मैले यसमा ताजा आर्टिकोकस राखें र ती स्वादिष्ट थिए। बाडेको मा धन्यवाद
मिलेटकिलालाई जवाफ दिनुहोस्
हामी खुशी छौं कि तपाईंले यो मनपराउनु भयो !!
शानदार! अब हामी मौसममा छौं त्यसैले तपाईंले उनीहरूको फाइदा लिनुपर्दछ 😉
राम्रो सेतो शराब ले यसलाई नींबू को लागी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ??
क्लियोपेट्रा लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते क्लियोपेट्रा, मँ सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ यसलाई ४० ग्राम पानी र १० ग्राम सिरकाको साथ बदल्नुहोस् वा यदि तपाइँ नींबू चाहानुहुन्छ। तपाइँ यसलाई 40 ग्राम लेगर + 10 ग्राम पानी को लागी प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि स्वाद थोरै परिवर्तन हुनेछ तर यो निश्चित रूप बाट राम्रो संग काम गर्दछ। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
Caramelized अखरोट संग क्रीम आइसक्रीम
बदाम क्रिस्टेड साल्मन र पेपरडेले लेमन सॉसमा मटरको साथ